Maxaa ka ogtahay sheekada Ilhan Cumar ay isaga fureyso ninkeeda Soomaaliga ah? - Bandhiga Media
Maxaa ka ogtahay sheekada Ilhan Cumar ay isaga fureyso ninkeeda Soomaaliga ah?
Wargayska The Daily Mail oo ka soo baxa London ayaa Ku warramaya in Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka Congress-ka Maraykanka iney iska furayso ninkeeda , Axmad Xirsi , si ay nolol cusub iyo jacayl ula wadaagto Tim Mynett oo ah ninka u qaabilsan ololeheeda doorasho dhinaca istiraatiijiyadda iyo qorsheynta .
Dacwad furiin oo ka dhan ah seygeeda Axmed Xirsi oo Saddex cunug ka dhalay ayey u gudbisay maxkamadda gobolka Minnesota.
Khilaafkan soo kala dhex-galay Ilhaan iyo Axmed ayaa soo jiitamaysay ilaa bishii Augusto, kadib markii ay adkaatay wada-noolashahoodii, taasoo keentay in ugu danbeyntii ay furiinkan dalabato.
Ilhaan ayaa maxkamadda Minnesota u sheegtay in ” Xiriirkeena guur waxa uu u burburay si aan ka soo kabasho la hayn “.
Mynett ayaa si joogta ah loo arkaa isagoo Ilhaan la socda marka ay ka qayb galayso shirarka iyo xafladaha , wuxuuna dhawaan ku weheliyay socdaallo ay ku tagtay magaalooyinka New York , Los Angels , Austin iyo Seattle , waana ninka loo badinayo iney isguursan doonaan.
Ilhaan iyo Axmad ayaa is guursaday sanadkii 2002da, hasse ahaatee waxaa la sheegay in ay mar ay kala tageen guurkoodii hore kaddib, balse dib isugu soo laabteen sanadkii 2018ka.
Hadaba Khilaafka Ilhaan iyo Axmed lama oga halka uu ku dambeyn doono oo mudooyin ugu danbeeyay waxaa ad u hadal-hayay dadka isticmaala barasha bulshada, iyagoo aragtiyo kala duwan ka dhiibanayay.
By : Press room Tags: Maxaa ka ogtahay sheekada Ilhan Cumar ay isaga fureyso ninkeeda Soomaaliga ah?
Dhageyso: Barakacayaasha ku nool duleedka Muqdisho oo saameyn uu ku yeeshay roobabkii da’ay